YAAB! Maxaa Dhacay Markii Uu Roberto Firmino Weydiiyey Sadio Mane Sababta Uu Ugaga Dayday Dabbaal-degga Goolasha? - Gool24.Net
Xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane ayaa si lama filaan ah usoo minguuriyey dabbaal-degyadii uu caanka ku ahaa laacibka ay isku kooxda yihiin ee Roberto Firmino.
Laba dabbaal-deg oo uu ku ahaa Firmino ayuu xili ciyaareedkan sameeyey Mane, waxaanay midka hore ahayd inuu isqabtay isha xilli uu u damaashaadayey gool uu dhaliyey, midka labaadna waxa uu sameeyey in uu kor u booday sidii uu kubbad laagayo, taas oo uu uga horreeyo Roberto Firmino.
Labadan laacib oo ah saaxiibo kaftan wadaag ah, waxa qolka lebbiska dhexdiisa ay ku wadaageen xoogaa sheeko ah oo ku saabsan noocyada damaashaadka ee ay sameeyeen, waxaana ilaaqtanka bilaabay xiddiga reer Brazil oo Mane weydiiyey sababta uu dabbaal-degyada ugaga daydo.
Firmino ayaa waxa uu ka warramay wixii kala qabsaday mar uu weydiiyey Mane dabbaal-degyada uu kaga daydo, waxaanu yidhi: “Mar walba waxaan ku idhaadaa Sadio waxaad iga koobiyeysaa dabbaal-degyada, wuxuu igaga dayday wax walba oo aan sameeyey. Runtii waa xaraabaad, in badanna waanu ka wada hadalnaa ciyaaraha kaddib.
“Wuxuu ii sheegay in aanu aniga igaga dayan ee uu isagu abuuray (dabbaal-degyada noocaas ah). Wuxuu igu yidhi, aniga ayaa ikhtiraacay (dabbaal-degyada dhinaca loo boodayo) anigu aan hal gacan ku sameeyo isaguna labadaba.”
Roberto Firmino waxa kale oo uu sheegay in Sadio Mane uu yahay ciyaartoy u dhashay kalsooni, waxaanu yidhi: “Wuxuu ku koray kalsooni gudaha garoonka ah, wayna ila tahay inaaanu isla qabsanay, sababtoo ah muddo afar sannadood ah ayaanu halkan ka wada ciyaarnay.
“Waa mid ku timaadda (Kalsoonidu) tababarka, maalin walba oo laga sii wanaagsanaado iyo in ciyaar walba si wanaagsan uu u dheelo. Waxa aan ku faraxsanahay in uu ku guuleystay abaal-marinta Xiddiga Sannadka ee Afrika, waxaanan jecelahay inaan u hambalyeeyo.”